မိုးရက်တွေမှာ Kendall Jenner ရဲ့ ဘယ်လို Fashion တွေနဲ့ လန်းမလဲ?
18 Jun 2018 . 3:43 PM
Kendall Jenner ဆိုတာက ဘိုဆန်ဆန်မျက်နှာကျချွန်ချွန်၊ သွယ်လျလွန်းတဲ့ ပေါင်တံလေးတွေနဲ့ မော်ဒယ်လ်လောကရဲ့ ထိပ်သီး နာမည်ကြီး မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ပါ။
အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်သလောက် သူမရဲ့ ဝတ်စားပုံတွေ Fashion တွေဟာဆိုရင်လည်း အမြဲတမ်း လုံလုံခြုံခြုံဝတ်တတ်သူ၊ Skinny Pant တွေစွဲစွဲမြဲမြဲ ဝတ်တတ်သူ၊ Girly Type မဟုတ်ဘဲ ယောက်ျားဆန်ဆန် Fashion မျိုးတွေနဲ့ New York လမ်းမတွေထက်မှာ အမြဲ Smart ကျကျတွေ့မြင်ရသူပါ။
ဒါ့ကြောင့်မို့ အရပ်ရှည်ရှည်၊ ပေါင်တံသွယ်သွယ်နဲ့ အထာကျကျမိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် မိုးရာသီနေ့ရက်တွေကို အမိုက်စား ဖြတ်သန်းဖို့ New York ရဲ့ မိုးရက်တွေမှာ Kendall ဘယ်လိုဝတ်ဆင်လဲဆိုတဲ့ Outfits Idea တွေကို အတုယူဝတ်ဆင်တတ်အောင် Fashion ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်းအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အုံ့မှိုင်းမှိုင်းမိုးရာသီမှာ Kendall ဝတ်ထားတဲ့ Pure Color Long sleeve turtleneck Crop Top လေးနဲ့ Jeans လေးသာဝတ်လိုက်ရင်တော့ ခါးသေးသေးနဲ့ အထာကျတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်မှာ လုံးဝအသေအချာပါ။
Trench Coat လေးနဲ့ Jeans Legging လေးနဲ့ ဒီလို Color မှိုင်းမှိုင်းလေးတွေကလည်း ဘယ်ချိန်ဝတ်ဝတ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ကြည့်ကောင်းနေတာပါပဲ။
Leather တွေကလည်း မိုးရာသီမှာ လုံးဝမေ့ထားလို့ မရတဲ့ Fashion Theme တွေဆိုတာကို Kendall က ဒီလို တွဲဖက်ဝတ်ပြထားပါတယ်။
Jeans ကို Jeans နဲ့ တွဲဝတ်ပြီး Sport Shoes လေးနဲ့လည်း အထာကျကျနဲ့ မိုးရာသီအတွက် လန်းနေဆဲဆိုတာ ဒီပုံလေးမှာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
စိမ်းပြာရောင် အကွက်လေးနဲ့ Denim High Rise Boyfriend Jeans လေးနဲ့ ဆိုရင်လည်း Fashionista တစ်ယောက်မှန်းသိသာစေမယ့် ရွေးချယ်မှုပါပဲ။
ဘယ်တော့မှ မရိုးတဲ့ Fashion ကတော့ Sweater နက်လေးနဲ့ Jeans လေးကို Sneaker ဖြူလေးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပါပဲ။
မိုးတွင်း Party တွေ အတွက် ဒီလို leather legging လေးတွေနဲ့လည်း တွဲဖက်ဝတ်လို့ရပါသေးတယ်။
Wow…လို့ ရေရွတ်မိလောက်အောင်ကို All Black Theme ကတော့ မိုးရာသီမှမဟုတ် အချိန်မရွေး အမြဲတမ်းဂေါ်နေတာပါပဲ။
သိုးမွေး Coat လေးတွေနဲ့ Skinny ဘောင်းဘီလေးကို ငွေရောင် Metallic Boot လေးနဲ့ Kendall ရဲ့ မိုးတွင်း Fashion ကလည်း မရိုးမဆန်းနဲ့ ခပ်လန်းလန်းပါပဲ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မိုးတွင်းအတွက် Kendall Jenner ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကို Inspiration ယူပြီး အထာကျကျနဲ့ လုံခြုံတဲ့ မိုးရာသီ Fashion တွေ ဖန်တီးနိုင်ကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
မိုးရကျတှမှော Kendall Jenner ရဲ့ ဘယျလို Fashion တှနေဲ့ လနျးမလဲ?
Kendall Jenner ဆိုတာက ဘိုဆနျဆနျမကျြနှာကခြှနျခြှနျ၊ သှယျလလြှနျးတဲ့ ပေါငျတံလေးတှနေဲ့ မျောဒယျလျလောကရဲ့ ထိပျသီး နာမညျကွီး မျောဒယျလျတဈယောကျပါ။
အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျသလောကျ သူမရဲ့ ဝတျစားပုံတှေ Fashion တှဟောဆိုရငျလညျး အမွဲတမျး လုံလုံခွုံခွုံဝတျတတျသူ၊ Skinny Pant တှစှေဲစှဲမွဲမွဲ ဝတျတတျသူ၊ Girly Type မဟုတျဘဲ ယောကျြားဆနျဆနျ Fashion မြိုးတှနေဲ့ New York လမျးမတှထေကျမှာ အမွဲ Smart ကကြတြှမွေ့ငျရသူပါ။
ဒါ့ကွောငျ့မို့ အရပျရှညျရှညျ၊ ပေါငျတံသှယျသှယျနဲ့ အထာကကြမြိနျးကလေးတဈယောကျအဖွဈ မိုးရာသီနရေ့ကျတှကေို အမိုကျစား ဖွတျသနျးဖို့ New York ရဲ့ မိုးရကျတှမှော Kendall ဘယျလိုဝတျဆငျလဲဆိုတဲ့ Outfits Idea တှကေို အတုယူဝတျဆငျတတျအောငျ Fashion ခဈြမွတျနိုးသူတိုငျးအတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
အုံ့မှိုငျးမှိုငျးမိုးရာသီမှာ Kendall ဝတျထားတဲ့ Pure Color Long sleeve turtleneck Crop Top လေးနဲ့ Jeans လေးသာဝတျလိုကျရငျတော့ ခါးသေးသေးနဲ့ အထာကတြဲ့ မိနျးကလေးဖွဈမှာ လုံးဝအသအေခြာပါ။
Trench Coat လေးနဲ့ Jeans Legging လေးနဲ့ ဒီလို Color မှိုငျးမှိုငျးလေးတှကေလညျး ဘယျခြိနျဝတျဝတျ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ ကွညျ့ကောငျးနတောပါပဲ။
Leather တှကေလညျး မိုးရာသီမှာ လုံးဝမထေ့ားလို့ မရတဲ့ Fashion Theme တှဆေိုတာကို Kendall က ဒီလို တှဲဖကျဝတျပွထားပါတယျ။
Jeans ကို Jeans နဲ့ တှဲဝတျပွီး Sport Shoes လေးနဲ့လညျး အထာကကြနြဲ့ မိုးရာသီအတှကျ လနျးနဆေဲဆိုတာ ဒီပုံလေးမှာ မွငျနိုငျပါတယျ။
စိမျးပွာရောငျ အကှကျလေးနဲ့ Denim High Rise Boyfriend Jeans လေးနဲ့ ဆိုရငျလညျး Fashionista တဈယောကျမှနျးသိသာစမေယျ့ ရှေးခယျြမှုပါပဲ။
ဘယျတော့မှ မရိုးတဲ့ Fashion ကတော့ Sweater နကျလေးနဲ့ Jeans လေးကို Sneaker ဖွူလေးနဲ့ အရိုးရှငျးဆုံး ဝတျစားဆငျယငျမှုပါပဲ။
မိုးတှငျး Party တှေ အတှကျ ဒီလို leather legging လေးတှနေဲ့လညျး တှဲဖကျဝတျလို့ရပါသေးတယျ။
Wow…လို့ ရရှေတျမိလောကျအောငျကို All Black Theme ကတော့ မိုးရာသီမှမဟုတျ အခြိနျမရှေး အမွဲတမျးဂျေါနတောပါပဲ။
သိုးမှေး Coat လေးတှနေဲ့ Skinny ဘောငျးဘီလေးကို ငှရေောငျ Metallic Boot လေးနဲ့ Kendall ရဲ့ မိုးတှငျး Fashion ကလညျး မရိုးမဆနျးနဲ့ ခပျလနျးလနျးပါပဲ။
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ မိုးတှငျးအတှကျ Kendall Jenner ရဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှုတှကေို Inspiration ယူပွီး အထာကကြနြဲ့ လုံခွုံတဲ့ မိုးရာသီ Fashion တှေ ဖနျတီးနိုငျကွလောကျပွီထငျပါတယျ။